အူ အတက်ပေါက် ခါနီးရင် ဒီ လို လက္ခဏာတွေ ပြ တတ်ပါတယ် – Shwewiki.com
အူ အတက်ပေါက် ခါနီးရင် ဒီ လို လက္ခဏာတွေ ပြ တတ်ပါတယ်
အူ အတက်ရောင် ခြင်းကြောင့်ခံစားရတဲ့ နာကျင်မှုဟာလွန်စွာ ဆိုးရွားကာ ချက်နားတစ်ဝိုက်မှ တဆင့်ညာ ဘက်ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းထိ ပျံ့နှံ့နိုင် ပါတယ်။
ဒီလိုနာကျင်မှုဟာ အူအတက်ပေါက်တော့ မယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပေမယ့် သေချာစေဖို့ အတွက် ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်ကဲ့သို့ စစ်ဆေးမှု မျိုးကိုမူပြုလုပ်သင့် ပါတယ်။
အူအတက်ရောင်တဲ့ လူနာတွေမှာ မတူညီတဲ့ မသက်မသာဖြစ်မှုတွေ အမျိုးမျိုးရှိ တတ်ကြပါ တယ်။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ကားပေါ် တက်ခြင်းစတဲ့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားအပြုအမူတွေ ကြောင့် နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားရပါက ဝမ်းဗိုက်တပြင် လုံးဟာ ရောင်ရမ်းနေလို့ ပဲဖြစ် ပါတယ်။
၎င်းအခြေအနေသည် အူ အတက်ပေါက်လုဆဲဆဲ (သို့) ပေါက်ပြီးတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
2. ပျို့အန်ခြင်းနှင့် အစားအသောက်ပျက်ခြင်း
အူအတက်ရောင်တဲ့ သူတိုင်း ဒီလိုရောဂါလက္ခဏာတွေ ခံစားရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗိုက်အောင့်ခြင်း အပြင်အထက် ပါလက္ခဏာတွေ ခံစားနေရပြီ ဆိုပါက စစ်ဆေးမှု တွေကို ပြုလုပ်သင့် ပါတယ်။
အူအတက်ရောင် ရမ်းခြင်းဟာ တစ် ခါတစ်ရံမှာ အူလမ်းကြောင်းနဲ့ အာရုံကြောစနစ်တွေကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေနိုင်တာကြောင့်ပျို့ အန်ခြင်းတွေ ခံစားရစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
3. ပုံမှန်ထက်ပို၍ ဆီးခဏခဏသွားခြင်း
အချို့သူတွေမှာ အူအတက်သည် ဆီးခုံရိုးအောက်နားမှာတည်ရှိ နိုင်တာကြောင့် ဆီးအိမ်နဲ့ ကပ်နေလေ့ ရှိပါတယ်။
ဆီးအိမ်ဟာရောင်ရမ်းနေတဲ့ အူအတက်နဲ့ ထိတွေ့မိတာကြောင့်သွားဆွ သလိုဖြစ်ပြီး ရောင်ရမ်း လာပါတော့ တယ်။
အကျိုး ဆက်အနေနဲ့မကြာခဏဆီးသွားချင်စိတ်ဖြစ်လာပြီးဆီးသွားတဲ့အခါမှာလည်း အလွန်နာကျင်ပါတယ်။
ဒါဟာ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာ ရဲ့ အချက်ပေးလက် ခဏာ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လည်း အခြားရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ တွဲနေပါက အူအတက်ရောင် တာ ပိုဖြစ်နိုင် ပါတယ်။
4. အဖျားကြီးပြီး ချမ်းတုန်ခြင်း
ကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်၍ ချမ်းတုန်ခြင်းဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်နေရာမှာ ရောင်ရမ်းမှု တစ်ခုခု ရှိနေတာကို ဆိုလိုပါတယ်။
အူအတက်ရောင်တဲ့ အခါမှာ တုံ့ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဓာတုပစ္စည်း အများအပြားထုတ်လုပ်၍ အချက်ပေးကာ တိုက်ခိုက်ဖို့ ဆဲလ်တွေကို ထိုနေရာသို့ ရောက်အောင် ခေါ်ဆောင်ပါတယ်။
ဤနည်းအားဖြင့် နာကျင်မှုဝေဒနာအပြင် ဖျားနာခြင်း၊ချမ်းတုန်ခြင်းတို့ကို ခံစားစေရစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဗိုက်အောင့်တာ အပြင် အဖျားပါကြီးပါက ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းသွားရောက် ပြသသင့်ပါတယ်။
သတိလစ် မေ့မြောတာတွေ ၊စိတ်ဂယောင် ချောက်ခြားတွေ ဖြစ်လာပါက ရောဂါပိုးတွေဟာ သွေးထဲ ရောက်လာတဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်ပြီး သေစေနိုင်တဲ့ အထိ ပြင်းထန် ပါတယ်။
အဲလို ဖြစ်ရတာဟာ ဦးနှောက်ထဲမှာ တစ်စုံတစ်ရာ မှားယွင်းနေလို့ မဟုတ်ဘဲ ရောဂါပိုးတွေ ပိုမိုပျံ့နှံ့လာပြီး အောက်ဆီဂျင်အပါအဝင် အခြားခန္ဓာ ကိုယ်အရင်း အမြစ်တွေကိုသုံးစွဲလိုက်တာ ကြောင့် ဦးနှောက်ဟာ လုံလောက်စွာ မရတော့ဘဲ ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ တာဖြစ် ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ စိတ်ခံစားမှု အခြေအနေ ပြောင်းလဲ လာပြီဟု အထင် ရှိပါက(အူအတက်ရောင်တာဖြစ်စေ ၊အခြား အခြေအနေ တစ်ခုခု ကြောင့် ဖြစ်စေ) အမြန်ဆုံး အကူအညီ ရယူသင့် ပါတယ် ။
အူ အတကျရောငျ ခွငျးကွောငျ့ခံစားရတဲ့ နာကငျြမှုဟာလှနျစှာ ဆိုးရှားကာ ခကျြနားတဈဝိုကျမှ တဆငျ့ညာ ဘကျဝမျးဗိုကျအောကျပိုငျးထိ ပြံ့နှံ့နိုငျ ပါတယျ။
ဒီလိုနာကငျြမှုဟာ အူအတကျပေါကျတော့ မယျလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတျပမေယျ့ သခြောစဖေို့ အတှကျ ကှနျပြူတာဓာတျမှနျကဲ့သို့ စဈဆေးမှု မြိုးကိုမူပွုလုပျသငျ့ ပါတယျ။
အူအတကျရောငျတဲ့ လူနာတှမှော မတူညီတဲ့ မသကျမသာဖွဈမှုတှေ အမြိုးမြိုးရှိ တတျကွပါ တယျ။ လမျးလြှောကျခွငျး၊ ခြောငျးဆိုးခွငျး၊ကားပျေါ တကျခွငျးစတဲ့ လှုပျလှုပျရှားရှားအပွုအမူတှေ ကွောငျ့ နာကငျြတဲ့ ဝဒေနာကို ခံစားရပါက ဝမျးဗိုကျတပွငျ လုံးဟာ ရောငျရမျးနလေို့ ပဲဖွဈ ပါတယျ။
၎င်းငျးအခွအေနသေညျ အူ အတကျပေါကျလုဆဲဆဲ (သို့) ပေါကျပွီးတာဖွဈနိုငျပါတယျ။
2. ပြို့အနျခွငျးနှငျ့ အစားအသောကျပကျြခွငျး
အူအတကျရောငျတဲ့ သူတိုငျး ဒီလိုရောဂါလက်ခဏာတှေ ခံစားရတာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဗိုကျအောငျ့ခွငျး အပွငျအထကျ ပါလက်ခဏာတှေ ခံစားနရေပွီ ဆိုပါက စဈဆေးမှု တှကေို ပွုလုပျသငျ့ ပါတယျ။
အူအတကျရောငျ ရမျးခွငျးဟာ တဈ ခါတဈရံမှာ အူလမျးကွောငျးနဲ့ အာရုံကွောစနဈတှကေို အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိစနေိုငျတာကွောငျ့ပြို့ အနျခွငျးတှေ ခံစားရစတော ဖွဈပါတယျ။
3. ပုံမှနျထကျပို၍ ဆီးခဏခဏသှားခွငျး
အခြို့သူတှမှော အူအတကျသညျ ဆီးခုံရိုးအောကျနားမှာတညျရှိ နိုငျတာကွောငျ့ ဆီးအိမျနဲ့ ကပျနလေေ့ ရှိပါတယျ။
ဆီးအိမျဟာရောငျရမျးနတေဲ့ အူအတကျနဲ့ ထိတှမေိ့တာကွောငျ့သှားဆှ သလိုဖွဈပွီး ရောငျရမျး လာပါတော့ တယျ။
အကြိုး ဆကျအနနေဲ့မကွာခဏဆီးသှားခငျြစိတျဖွဈလာပွီးဆီးသှားတဲ့အခါမှာလညျး အလှနျနာကငျြပါတယျ။
ဒါဟာ ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျတာ ရဲ့ အခကျြပေးလကျ ခဏာ ဖွဈနိုငျပမေယျ့လညျး အခွားရောဂါလက်ခဏာတှနေဲ့ တှဲနပေါက အူအတကျရောငျ တာ ပိုဖွဈနိုငျ ပါတယျ။
4. အဖြားကွီးပွီး ခမျြးတုနျခွငျး
ကိုယျအပူခြိနျမွငျ့တကျ၍ ခမျြးတုနျခွငျးဆိုတာ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ တဈနရောမှာ ရောငျရမျးမှု တဈခုခု ရှိနတောကို ဆိုလိုပါတယျ။
အူအတကျရောငျတဲ့ အခါမှာ တုံ့ပွနျတဲ့ အနနေဲ့ ခန်ဓာကိုယျဟာ ဓာတုပစ်စညျး အမြားအပွားထုတျလုပျ၍ အခကျြပေးကာ တိုကျခိုကျဖို့ ဆဲလျတှကေို ထိုနရောသို့ ရောကျအောငျ ချေါဆောငျပါတယျ။
ဤနညျးအားဖွငျ့ နာကငျြမှုဝဒေနာအပွငျ ဖြားနာခွငျး၊ခမျြးတုနျခွငျးတို့ကို ခံစားစရေစတော ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ဗိုကျအောငျ့တာ အပွငျ အဖြားပါကွီးပါက ဆရာဝနျနဲ့ ခကျြခငျြးသှားရောကျ ပွသသငျ့ပါတယျ။
သတိလဈ မမွေ့ောတာတှေ ၊စိတျဂယောငျ ခြောကျခွားတှေ ဖွဈလာပါက ရောဂါပိုးတှဟော သှေးထဲ ရောကျလာတဲ့ လက်ခဏာ ဖွဈပွီး သစေနေိုငျတဲ့ အထိ ပွငျးထနျ ပါတယျ။
အဲလို ဖွဈရတာဟာ ဦးနှောကျထဲမှာ တဈစုံတဈရာ မှားယှငျးနလေို့ မဟုတျဘဲ ရောဂါပိုးတှေ ပိုမိုပြံ့နှံ့လာပွီး အောကျဆီဂငျြအပါအဝငျ အခွားခန်ဓာ ကိုယျအရငျး အမွဈတှကေိုသုံးစှဲလိုကျတာ ကွောငျ့ ဦးနှောကျဟာ လုံလောကျစှာ မရတော့ဘဲ ကောငျးစှာ အလုပျမလုပျနိုငျတော့ တာဖွဈ ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ တဈစုံတဈယောကျဟာ စိတျခံစားမှု အခွအေနေ ပွောငျးလဲ လာပွီဟု အထငျ ရှိပါက(အူအတကျရောငျတာဖွဈစေ ၊အခွား အခွအေနေ တဈခုခု ကွောငျ့ ဖွဈစေ) အမွနျဆုံး အကူအညီ ရယူသငျ့ ပါတယျ ။
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု နဲ့ ပတ် သက်ပြီး မှုခင်းရဲတပ် ဖွဲ့အရာရှိသုံးဦး ကို တရားစွဲ ဖို့ သမ္မတထံလျှောက်ထား
သွေးတိုးနှ င့် နှ လုံးသွေးကြော ကျဉ်း ရောဂါ အတွက် ဒန့်သလွန်အစေ့ခြောက်အ စွမ်း